FAQs - Omu CNC Technology Co., Ltd
mvura jeti nokuveza Machine
mitengo edu inozviisa kuchinja zvichienderana muchina configuration uye achivapa musika chikonzero. We kukutuma ane yoku- wekunge pashure achisimbisa yakakodzera muchina configuration kwauri uye zvakadzokororwa chinonzi mumwedzi mumwe.
Unogona kuita mari yedu akaundi, Western Union kana PayPal: sales@omni-cnc.com.
CNC Router izere 12 mwedzi shure chawo garandi pamusoro router cnc uye akakodzera vagadziri garandi pamusoro 3rd bato wedzera Ons. Izvi anofukidza zvemagetsi uye zvemaziso zvikamu pasi 'vakakwana kushandiswa'.
Laser Machine izere 12 mwedzi shure chawo garandi pamusoro Laser muchina uye akakodzera vagadziri warrty pamusoro 3rd bato kuwedzera vane kunze consumable nhengo. Garandi nokuti Laser chubhu Reci pefiyumu: 6 mwedzi, neLens & Mirror: 3 months.
CNC Plasma Machine izere 12 mwedzi shure chawo garandi uye akakodzera manufactures warraty pamusoro 3rd bato kuwedzera vane kunze consumable nhengo. Akadai se: kamwene, electrode, dziviriro chivharo etc.
Kutumirwa mutengo zvinoenderana nenzira yaunosarudza kuti nhumbi. Express dzinowanzoona kupfuura inoita asiwo nzira inonyanya zvinodhura, chete yakakodzera Mini Laser kana router. By seafreight ndiyo nzira yakanakisisa kuti cnc router muchina kana Laser, yeplasma muchina. mitoro gedye prices tinogona chete kudzokorora mushure achisimbisa muchina womuenzaniso, uye ichi frieignt akatorwa zvakare chete rinoshanda mumwedzi mumwe.
Adress: 6-50-501 Advanced Business Centre, Tianqiao, Jinan, Shandong
Chat musi Skype